Job နဲ့ Career ဘာကွာလဲ ? - JobExpress Myanmar
Home Jobseeker Career Advice
Job နဲ့ Career ဘာကွာလဲ ?
Job ပဲဖြစ်ဖြစ် Career ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်နဲ့ သင့်မိသားစုအတွက် ဝင်ငွေတစ်ခုရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ အရာဖြစ်တယ်။ နှစ်ခုလုံးက တူတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ မတူပါဘူး။
အလုပ်ဆိုတာကြ လက်ရှိကိုယ်က ဝင်ငွေရဖို့အလုပ်လုပ်နေတာ သက်သက်ပါ။Career ကတော့ ကိုယ်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက်ကိုယ်ဘာတွေ ပြင်ဆင်သင့်လဲ၊ ကိုယ်ယခု လုပ်နေတဲ့ အရာကရေရှည်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ကိုယ့်အတွက်တိုးတက်နိုင်လဲဆိုတာကိုပါ ထည့်ပြီး စဉ်စားတာမျိုးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းက Job နဲ့ Careerကိုသိပ်ကွဲပြားလေ့မရှိတာကြောင့် တစ်ခုချင်းဆီရဲ့ Meaning လေးတွေကို ဒီနေ့လေးမှာသေချာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
အလုပ်ဆိုတာက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ ပိုက်ဆံရှာမယ်။ပြီးရင် Short-term အနေနဲ့ လုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလုပ်ဆီကနေ သင်သိသင့်၊တတ်သင့်တဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုပဲ သင်လေ့လာမယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ဖို့ သင်က စိတ်အားထန်သန်စွာသင်ယူမှာမဟုတ်ပါ။တကယ်တမ်းကြ ကျွန်တော်တို့က ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာ ရေရှည်တွေးတတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ အလုပ်အပေါ်မှာထားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုက Careerနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။အလုပ်ကို အလုပ်လို့တွေးတဲ့သူက လစာရဖို့ပဲကြည့်မယ်။ရာထူးတိုးဖို့ပဲကြည့်မယ်။လစာပိုပေးနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးကို ရှာမယ်။ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေမဲ့ နေရာမှာပဲသက်တောင့်သက်သာနေမယ်။ဒီနေရာမှာ အဆင်မပြေရင် နောက်တစ်နေရာကိုပြောင်းမယ်။ အချူပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် သူရဲ့ Goal ကဝင်ငွေများများရဖို့က အဓိကဖြစ်တယ်။
Careerလို့ ကျွန်တော်တို့ တွေးပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲမပြတ်လေ့လာနေမယ်။အနာဂတ်မှာ ကိုယ်ဘဝတိုး တက်ဖို့ ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ပြင်ဆင်မယ်။ ကိုယ်ကဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရတဲ့နေရာလေးမှာတင်ကျေနပ်မနေပဲ သင်ယူသင့်တာတွေကိုကြိုးစား သင်ယူမယ်။အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခုခု အမှားရှိခဲ့ရင်တောင် အမှားတွေကတစ်ဆင့် အတွေ့အကြုံယူပြီး သင်ခန်းစာတွေယူမယ်။ အလုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကိုယ်ရဲ့ အားသာချက်တွေ၊ ကိုယ်ရဲ့ ဝါသနာတွေကို သိအောင်လုပ်မယ်။တကယ်ဆို Career ဆိုတာက Long Termဖြစ်လို့ သင်ကိုယ်သင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်အောင်တွန်းတင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သင်အနေနဲ့လည်းဒါမျိုး ဖြစ်ဖို့ Training ကောင်းကောင်းတွေ၊သင်တန်းတွေ တက်တာမျိုးတွေ၊ အလုပ်မှာရှိတဲ့ Senior တွေဆီက‌နေ လိုအပ်ချက်တွေကို သင်ယူတတ် တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အကုန်လုံးကို ခြုံငုံ ကြည့်မယ်ဆိုရင် Career က ရည်ရွယ်ချက်၊ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး လစာတစ်ခုတည်းကို မကြည့်ဘဲ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနဲ့ ဆက်စပ်နေသောအရာဖြစ်တယ်။
လူငယ်တော်တော်များများက လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး သုံးသပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကအခုအခြေနေလေးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီး‌ရေပေါ်ဆီလိုမျိုး မသိမသာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။တကယ်က ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲတတ်တာကိုသတိရဖို့ပါပဲ။ဒီတိုင်းအဆင်ပြေသလို မနေဘဲ ကိုယ်ရဲ့ Career ကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပါ။ကိုယ်တိုင်က လည်း Career တစ်ခုကို လျှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာ အမြဲသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကိုယ်ဖြည့်မယ်။
ဥပမာ ပေးရရင် ဓားသွေးနေသလို ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် အစဉ်မပြတ်ထက်မြက်နေစေဖို့ ပညာဝမ်းစာကိုအမြဲဖြည့်နေဖို့လိုပါတယ်။အလုပ်ကနေ Career ဘက်ကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်တာမို့ ကိုယ်ကအရင်ကထက်ပိုကောင်း‌‌‌အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။အခုချိန်မှာ မသိသာပေမဲ့ နောင်အနာဂတ်ရဲ့ ရှေ့ရေးကို ကြိုတွေးပြီးအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူက တစ်ခြားသူများထက်သာနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Power Ranger လုပ်မလား ?Superman လုပ်မလား ?
How to be visible for jobseeking ?
Phone နဲ့ Interview တစ်ခုဖြေတဲ့အခါ...
More Social Information
ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်စီတိုင်း သိထား သင့်တဲ့ခွင့်ရက်အမျိုးအစားများအကြောင်း
Interviewမှာ “လုံးဝ” မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်း (၅) ခု